Kedu ihe pụrụ iche banyere ime SEO maka ụlọ ọrụ IT?
Maka ụfọdụ ndị mmadụ, ọ nwere ike ịbụ ajụjụ ajuju - iji ugwo okporo ụzọ search engine, ma ọ bụ kpụga ya na weebụsaịtị? Mụ onwe m, mgbe ụfọdụ ị na - eme ihe banyere ngwanrọ software ahụ, na - ejikwa SEO maka ụlọ ọrụ IT ọ bụla abụghị ihe ọ bụla ịhọrọ. Usoro okporo ụzọ na-ewetakarị ọnụ ọgụgụ kasị elu nke ntọghata, n'ihi ya inye ezigbo mma na-eduga, na-enweghị ụgwọ ọ bụla. Naanị ọnụ ọgụgụ dị jụụ na-eguzogide organic ozugbo na ihe niile. Dị ka nchọpụta a mere n'oge na-adịbeghị anya, a chọpụtara na ihe karịrị 90% nke ntinye ọ bụla dị na Google bụ nke gụnyere nchọta ọchụchọ nchọta, ebe nyocha a na-akwụ ụgwọ na-ewere ihe dịka 7% - bluebook airplane values. E kwuwerị, SEO maka ụlọ ọrụ IT nwere ọtụtụ ihe jikọrọ ya na echiche nkịtị, kama ihe dị iche. Ka anyi gbalịa ileba ya uzo site na uzo.
N'ụbọchị ndị a, enwere ọnụ ọgụgụ dịgasị iche iche nke nhọrọ dị iche iche iji kpụga okporo ụzọ dị elu na ibe weebụ na ihe ọ bụla isiokwu. Ọtụtụ mgbe, na-ekwu banyere SEO anyị na-eche na azụmahịa dị n'ịntanetị, dịka ọmụmaatụ, ụlọ ahịa weebụ. N'ezie, ọ na-esiteghị na ihe ụlọ ọrụ anyị na-eme. E wezụga SEO maka ụlọ ọrụ IT, anyị nwere ike ịnwe ihe atụ ọ bụla ọzọ, na-eburu ọiche ahịa ọ bụla anyị nwere ike iche. Ọbụna ụzọ ahụ, Otú ọ dị, aro m n'ozuzu ka ga-anọgide na otu. Ihe bụ na site na ele anya SEO na search engine nke onwe ya, enwere ihe abụọ bụ isi ihe kpatara:
Ọdịnaya dị elu nke nwere isiokwu dị mkpa na mkpịsị ugodi, nke na-enye ọtụtụ uru onye ọ bụla agụ;
Njikọ azụ Organic ejikọta ibe na weebụsaịtị ndị ọzọ. Njikọ dị n'etiti nsụgharị backlinks na ọnụ ọgụgụ ha, iji bụrụ kpọmkwem.
Ogologo oge gara aga, e nwere ihe kpatara na ịme ntakịrị ihe nwere oke okwu (n'ime isiokwu ọdịnaya dị mkpa) nwere ike ịdị mma zuru oke ka ị nwee mmetụta dị mma na ebe nrụọrụ weebụ gị.N'ụzọ dị otú ahụ, ịtụkwasị ụfọdụ backlinks dị mma dị ka isiokwu dị na ya ma gwa ha ka ha nweta ikike dị ike, ma ọ bụ ikekwe na-enweghị isi na nanị di na nwunye n'ụzọ ụfọdụ na-ejikọta mkpụrụ okwu nwere ike ịkwọ ụgbọala ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla nwere ihu ọchị n'elu Google search. N'ịme nke a, anyị enweghị ike ime ihe ọ bụla n'ụzọ nkịtị - ime SEO maka ụlọ ọrụ IT, ma ọ bụ ihe atụ ụfọdụ na-ere nri nri. Nanị ihe e nyere, ya mere, ọdịiche dị ukwuu, bụ otu ihe ahụ - na-eme ụfọdụ ihe eji eme ihe iji chekwaa na "ntụgharị" nke igwe.
Ma oge ndị ahụ gafeere, taa Google nchọta algorithms na-aghọwanye ọkaibe. N'okwu ndị doro anya, engine nyocha nwere ike ugbu a itinye ọdịnaya ọ bụla n'ime ihe nyocha dị ike, na-eji ihe karịrị narị 200 gaa n'ikpeazụ me mkpebi. Ọ bụla ịghọ aghụghọ ule, mmegbu ma ọ bụ ọbụna atụmatụ kachasị mma e mepụtara na-abaghịzi uru. Ya mere, egwu egwu nke taa pụtara inwe ọdịnaya dị mma maka ndị mmadụ, yana ihe dị oke mkpa iji mee ka ebe nrụọrụ weebụ gosipụta maka engines ọchụchọ. Iji nweta nkenke nke nkenzu, na-abụghị ọdịnaya na njikọta, ana m akwado ịgụ gbasara ihe dị elu 10 dị ugbu a nke SEO. Naanị ịgagharị, ọ bụ isiokwu dị ọkụ.